Welcome To TIIDE Program and Forum — TIIDE
Welcome To TIIDE Program and Forum
မင်္ဂလာပါ TIIDE Program မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
TIIDE ဆိုတာကတော့ Technology Internship & Industry Development Enterprise လိုအမည်ရပါတယ်။
Intern တွေ ဒီထဲမှာ သိလိုသည်များကို မေးနိုင်ပါတယ်။ Forum ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မေးထားတာတွေ ထပ်နေခဲ့သော အရင်မေးခဲ့တဲ့လူရှိရင် ဖြေထားတာတွေ ပြန်ကြည့်နိုင်အောင်ပါ။
TIIDE ရဲ့အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဆက်လက် ပြီးရှင်းပြပါဦးမယ်။ မေးလိုရာမေးနိုင်ပါပြီ။
TIIDE ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က နာမည်မှာ ပါသလိုပဲ နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်သင် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်းဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ဖိုပါပဲ။
၄ နှစ်တာ ပညာသင်ထားတဲ့ ကျောင်းဆင်းတွေ လုပ်ငန်းခွင် မဝင်ခင်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ (လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ရရင်တောင်) အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံရဖို့။
အလုပ်သင် လေ့ကျင့်ရေးမှာ လေ့ကျင့်ထားတာတွေဟာ တကယ့် လုပ်ငန်းဝန်းကျင်မှာ လက်တွေ့ကျတာတွေဖြစ်ဖို့။
ကျောင်းဆင်းသွားပြီးရင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖိုရာမှာ အံဝင်ခွင်ကျ၊​ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေဖို့တွေ အတွက်လည်းပါပါတယ်။
ဒီ TIIDE အစီအစဉ်မှာ ၂ မျိုး ၂ စားရှိပါတယ်။
1. ICIP - In-Campus Internship Program နှင့်
2. ODITP - On-Demand Internship Program တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ် ၂၀၁၈ မှာတော့
UCS Mandalay (မြစ်ကြီးနား ကျောင်းသားများ ပါဝင်) - ODITP
UCS Taungoo (ကလေး ကျောင်းသားများ ပါဝင်) - ICIP
UCS Thaton - ICIP
UCS Dawei - ICIP
တို့က ကျောင်းသား ၅၀၀ ကျော် ပါဝင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၊​နည်းပညာ အလုပ်မှာ အတွေ့အကြုံရှိ၊ စီးပွားရေးအဖြစ် လုပ်နေကြသူတွေကို အစီအစဉ်မှာ Director ခန့်အပ်ပြီး သူတို့က ဦးဆောင်လို့ ကျောင်းသားတွေကို အဖွဲ့အလိုက် သူတို့ရဲ့ ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းက အဝေးရောက် အလုပ်သင်အဖြစ် ညွှန်ကြား တာဝန်ပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
U Aye Kyaw Hlaing Vision2Motion Co., Ltd (တောင်ငူ၊ မန္တလေး)
U Aye Maung Maung Kyi Studio AMK Co., Ltd (သထုံ)
U Htoo Myint Naung Technomation Co., Ltd (သထုံ၊ မန္တလေး)
4, U Phone Pyae Oo Digital Royal Net Solution Co., Ltd (တောင်ငူ)
U Ravi Chhabra Geo Mandalar Co., Ltd (မန္တလေး)
U Swan Htet Aung Base Technology Co., Ltd (တောင်ငူ)
U Thar Htet Zwenexsys Int'l Ltd (သထုံ၊ မန္တလေး)
U Ye Thura Thet Kernellix Co., Ltd (ထားဝယ်၊​ မန္တလေး)
ပြဿနာက ကျောင်းဆင်းတွေ ဝင်ရောက်မယ့် ကွန်ပြူတာ industry ဟာ ကျောင်းဆင်းအားလုံးကို အလုပ်ပေးဖို့ ထား၊ အခမဲ့ အလုပ်သင်တောင် အကုန် မပေးနိုင်ကြပါဘူး။
ပိုက်ဆံလည်း တစ်ပြားမှမရဘဲနှင့်၊ ကိုယ့်ဖာသာ အိတ်စိုက် ဘာကြောင့် ဒါကို လုပ်နေကြရသလဲ လို့မေးရင် အဖြေရကျပ်ပါတယ်။
တစ်ချက်ခုတ် ၂၊ ၃၊ ၄ ချက် ပြတ်ပါပဲ။
1. နိုင်ငံအဝှမ်းက UCS ကျောင်းသားတွေအဖို့ Internship အလုပ်ရှာရခက်တာ၊ လူတိုင်း အခွင့်အရေးမရတာကို ကူညီဖို့က တစ်ကြောင်း
2. ကျောင်းမဆင်းခင်ကတည်း က အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိထားရင်၊ Industry မှာလိုအပ်နေတဲ့ လုပ်သားအင်အားကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာ တစ်ကြောင်း
3. ကိုယ့် လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်သား ရှာဖို့မှာ၊​ ရုံးခေါ်ထား ပြီး လစာပေး သင်ပေးရမှာထက်၊ အခုလို အလုပ်သင်အစီအစဉ်မှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို ကြိုသင်ပေးထားနိုင်တော့ ကျောင်းဆင်းတွေကို အလုပ်ခန့်ဖို့ အဆင်သင့်ရနိုင်တာတစ်ကြောင်း
4. ဒီ အစီအစဉ်ဟာ Scalable ဖြစ်ရင်၊​နောင်နှစ်မှာ ကျောင်းသားတိုင်း၊​ကျောင်းတိုင်း အလုပ်အတွေ့အကြုံရနိုင်အောင်ကို ကုမ္ပဏီနည်းနည်းနှင့် ကြဲကြဲ ဝိုင်းဖို့
ကျောင်းသားတွေထဲမှာ အလွန်ကြိုးစားမယ့်လူတွေ၊ ပြီးပြီးရော လုပ်မယ့်လူတွေ၊ ရေသာခိုမယ့်လူတွေ အစုံပါပါတယ်။ ကြိုးစားကြပါ။ *
Director တွေဖက်ကတော့ နှီးတစ်ပြားစာတောင် မလျေှာ့ဖို့ အာမခံပါတယ်။ တတ်သမှျ၊ နိုင်သမျှ သင်ပေး၊ ခိုင်းပေးပါမယ်။
Supervisor ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ ကျောင်းဖက်က ကူညီမှုတွေ မပါရင် ဒီလို အဝေးရောက် အလုပ်ခိုင်းတာမျိုး ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ TIIDE ရဲ့ အခုပေးတဲ့ ICIP နှင့် ODITP ဟာ ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ လုပ်ငန်းခွင်(နေရာရောက်) အလုပ်သင်ခြင်းကို အစားမထိုးနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် on-site အလုပ်သင် လက်ခံမယ့် လုပ်ငန်းရှိရင် အဲဒါကို ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။​
TIIDE ကတော့ ခေတ်မီ အင်တာနက် နည်းပညာကနေ ဆက်သွယ်ပြီး၊ အဝေးကနေ သင်ကြားပေး၊ အလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ခေတ်ကြီးမှာ၊​အဝေးကနေ ဆက်သွယ်ပြီး အလုပ်ခိုင်းတာကို လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်သားတစ်ယောက် ဖြစ်လာရင် ကမ္ဘာကြီး ဘယ်နေရာကရှိတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ရနိုင်တာမို့၊ လွပ်လပ်မှုကနေ စည်းကမ်းရှိမှု ကို ထိန်းသိမ်းပြီးလုပ်ရင် အိုးမကွာ အိမ်မကွာ နေပြီး computer လောကမှာ စီးပွားဖြစ်လုပ်စားနိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ဒီ TIIDE အကြောင်း သဘော ပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။
on-site အလုပ်သင် လက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းမှာ အလုပ်သင်အနေနဲ့ ဝင်လုပ်နေပါတယ် ဒါပေမယ့် TIIDE program မှာ ပါဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲခင်ဗျ
On-site အလုပ်ရထားပြီးရင်၊ ဘာလို့ ဒီစာရင်းထဲရောက်နေရသလဲ။​ ကျောင်းကိုမေးပါ။ လက်ရှိ စာရင်း ပါတဲ့လူတွေဟာ ကျောင်းကပေးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အလုပ်မရထားဘူးလို့ သိထားတဲ့ လူတွေပဲ။
Techno-bravoအဖြဲ႔ကပါ ဆရာဦးထူးျမင့္ေနာင္႐ွာခိုင္းထားတဲ့gitအေၾကာင္းကိုဖတ္ထားပီးပါပီ႐ွင့္ reportကforumထဲမွာတင္ရမွာလား messagerထဲတင္ေပးရမွာလား ဘယ္ေန႔ေနာက္ဆံုးတင္ေပးရမလဲသိခ်င္လို႔ပါ႐ွင့္